Gaddiga Doorashooyinka heer Puntland oo ka hor yimid go'aanka Guddiga Xalinta Khilaafaadka | SAHAN ONLINE
Gaddiga Doorashooyinka heer Puntland oo ka hor yimid go’aanka Guddiga Xalinta Khilaafaadka
Nabadoon Khaliif Aw-Cali
GAROOWE – Guddiga Doorashooyinka dadban ee heer Puntland ayaa kasoo horjeestay go’aanka Guddiga xalinta khilaafaadka ay ku laaleen kuraasta xubno aqalka hoose loogu agu doortay Garoowe.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka dadban ee Puntland Nabadoon Khaliif Aw-cali ayaa sheegay in uusan sax ahayn go’aanka kasoo baxay guddiga,wuxuu sheegay in doorashadii Puntland ay si caddaalad ah u dhacday oo adduunka oo dhan laga daawanayey.
Waxaan isleenahay warqadaasi waa lagu degdegay weeye, doorashadii halka (garoowe) ka dhacday oo aqalka hoose ku saabsanayd, wax dhibaato ahi kama jirin, sababaha iyo wax ku saleeyeen faahfaahinteeda maa anaan helin”ayuu yiri
Waxa uu sheegay in boqolkiiba boqol ay khaldan yihiin qolada warqada soo saartay sababtoo ah buu tiri nidaamka iyo habraaca waa mid ay ku shaqeynayeen.
Guddiga xalinta khilaafaadka Doorashooyinka ayaa waraqad ay soo saareen lagu sheegay in kadib baaritaan la sameeyey iyo caddeymo a helay uu guddigu go’aamiyey in la laalo oo dib loogu nqodo doorashada 11-kursi ee aqalka hoose.
Guddiyadiyadii doorashooyinka ee Hirshabelle iyo Konfur galbeed ayaa ka horyimid go’aanka guddiga khilaafaadku ku laaleen doorashada 11-ka Xildhibaan ee lagu doortay magaalooyinka Cadaado,Jowhar,Kismaayo,Baydhabo iyo Garoowe.